Kordhinta Tirakoobayaasha iyo Kobcinta Ka Qeybgalashada Talooyinkan Twitter Talooyin Ku Saabsan Cimilada
Frank Abagnale, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiilku, wuxuu sheegayaa sababaha ugu wayn ee weynaanta Twitter:
La shaqaynta dadka kale iyo bixinta qiimaha dhabta ah
Qaadashada hab aad u ekaato mid aad ku qanci kartid xaalad dhab ah
Ma jirto spam
Naqshadaynta xiriirro muhiim ah
Fikradaha asaasiga ah waxay si khaas ah uga faa'iideysanayaan xaqiijinta shaqada Twitter.
1. Ka dib markay dadka kale soo noqdaan
Waxaan si joogto ah u ansixiyay talada Twitter-ka in qofku raaco qof kasta oo raacaya isaga ama iyada. Waxaan soo helay fursado yar oo u muuqda inaan u shaqeynayo aniga ahaan: Xulashadu waxay sheegeysaa in mid ka mid ah la raacayo xisaabaadka xiisaha leh - servidores para sites gratuitos.
2. Habka muhiimka ah ee lagu raacayo shakhsiyaadka Twitter
Haddii aad u baahato inaad kor u qaaddo hindiseyaal adigoo isticmaalaya Twitter, waa inaad maskaxda ku haysaa seddexda arrimood ee soo socda si aad ugu noolaato fikradahan: fariin, ka qaybqaadasho, iyo sidoo kale Gaaritaanka
mar marka qaarkood, qofku wuxuu fursad u heli karaa inuu la xiriiro dadka oo uu kala xaajoodo beeshaada qaar ka mid ah waxyaabo waaweyn oo ka soo baxa boggaaga. Uma baahnid inaad la soo baxdo suuq geynta.
Haddii aan laguu waxyoonin waxyaabo gaar ah oo ku jira akoontiga Twitter, ma haysatid wax sabab ah oo aad dib ula socotid. Fursadda ay akhristayaashu ku leeyihiin xiisahaada boostadaada, waxay sii wadi doonaan adiga kadibna isla markiiba waxay u jeedaan akhristayaasha caadiga ah.
4. Ka-faa'iideysiga badeecadaada iyo nuxurka bogagga shabakadda ee shabakadaha ku saleysan
Dhiirigelinta tooska ah waxay si toos ah ugu xiran tahay bixinta dhiirigelin qaar ka mid ah dhiirigelintaada iyo inaad dhex gashid adigoo adeegsanaya sheeko cajiib ah. Haddii boostada boggaaga ka kooban yahay mid gaar ah, ha ka walaacin wicitaanka taleefanka ee badhanka waxqabadka.
Inkasta oo inta badan warbaahinada bulshada ay kugu barayaan inaad la shaqeysid saamileyaal leh ujeedo ah in lagu gaaro kalsooni dheeraad ah iyo sidoo kale kuwa raacsan, dhab ahaan, waa hawl aad u adag! Waxyeelladu waa kuwo si weyn u mashquulsan inta badan aaney ahayn waxayna u badan tahay in ay suurtogal tahay in ay boqolaal sheeko oo maalinle ah ka jawaabaan.
6. Jooji jadwalkaaga
Haddii aad isticmaasho Twitter-ka sida internetka loo qaabeeyey, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in jadwalkaaga uu yahay mid xor ah oo nadiif ah. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho tiro badan oo taageerayaal Twitter ah, waa inaad bilowdaa ka dib markaad tiriso shaqsiyaad tiro badan oo waqtigaaga ayaa si weyn kor ugu kici doona.